FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BASENJI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Basenji
Perrin the Basenji tamin'ny 1 ½ taona tamina dia fitsangantsanganana— 'Halany ny rano, fa hiditra ampy izy handoana ny tongony.'
Lisitry ny alika mifangaro Basenji
Ter Teratany Kongo
Alika Bush Bush
Alika Barkless Afrikana
Basenjis dia alika malama, hozatra ary atletika amin'ny lafiny kely. Miketrona manodidina ny handrina ny loha ary fohy kokoa noho ny karan-doha, izay misolelaka ny vava. Ny maso kely, miendrika amandy dia hazelitra mainty ho an'ny volontany mainty. Ny sofina dia mahitsy, kely, mahitsy ary misokatra eo aloha. Milavo ny lamosin'ilay alika ary mahitsy ny tongotra. Atao avo ny rambony ary aforitra amin'ny lafiny roa. Fohy, mamirapiratra ary tsara ny palitao ary tonga mainty, varahina, mena, mena, na trisolor miaraka amin'ny mainty, mainty sy fotsy, na mainty, brindle sy fotsy. Ny fenitra AKC dia miantso ny alika hanana fotsy amin'ny tongony, tratra ary tendron'ny rambony. Ny tongotra fotsy, ny afo ary ny vozon'akanjo dia tsy voatery. Ny Basenji dia tsy mivovo, fa mitabataba kosa. Midradradradra sy midradradradra ary goaika ihany koa izy, arakaraka ny fihetsiky ny alika.
Ny Basenji dia mailo, be fitiavana, be hery ary liana te hahafantatra. Tia milalao izy ary mahavita biby tsara, raha mbola kely foana no hitantanana azy. Tena manan-tsaina izy io ary mamaly tsara ny fiofanana miaraka amin'ny faniriana mafy hampifaly. Afaka natokana ho an'ny olon-tsy fantatra izy, noho izany mifanerasera tsara . Ny Basenji dia somary voatokana, saingy mbola afaka mamorona fatorana matanjaka amin'ny olombelona. Tsy tokony hatokisana izany biby fiompy tsy kaninina . Mahasoa indrindra amin'ny ankizy mahatakatra ny fomba hanaovana izany maneho fahaiza-mitarika mankany amin'ny alika. Tsy tian'ny Basenji ny toetr'andro mando. Tiany ny mitsako , ka ny fanomezana kilalao maro ho azy dia mety tsara. Tia mihanika ny karazany ary afaka miala amin'ny fefy tariby mora foana. Manana toetra tsy manam-paharoa ny tsy fikororohana (manao fery ambany sy ranon-javatra kosa) ary manadio tena toa a saka . Azo faritana ho mailaka, frisky ary tsy sasatra amin'ny lalao izy. Ny ankamaroan'ny olan'ny Basenji dia matetika misy tsy fitoviana eo amin'ny tompona sy ny biby fiompy. Diso ny tompony ny hoe «mangina» adjectif midika hoe tsy miasa fa tsy mitabataba noho izany, lasa alikaola alika mihetsiketsika izy ireo, na dia somary mangina aza. Mila fanazaran-tena isan'andro ny basenjis mamoaka angovo ara-tsaina sy ara-batana . Basenjis dia fetsy be amin'ny fividianana ny fombany manokana ary tsy mahomby amin'ny famoretana noho ny amin'ny hatsaran-tarehy, ary noho izany mila tompona mampiseho fahefana voajanahary . izay manao lalàna ary mifikitra aminy. Milamina, nefa hentitra, matoky tena ary tsy miovaova, Basenjis izay manana tompony malemy fanahy na mandalo, na tompona tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia ho lasa mitaky be. Ny alika no handray ny andraikitry ny mpitarika kitapo ary hipoitra ny olan'ny fihetsika, indrindra rehefa avela irery . Tompony mahatakatra fihetsika canine ary mitsabo ny alika mifanaraka amin'izany dia hahita azy ireo ho biby fiompy mahafinaritra.
Milanja: Lehilahy 22 - 26 pounds (10 - 12 kg) Vehivavy 20 - 25 pounds (9 - 11 kg)
Ity karazana ity dia mora voan'ny aretina Fanconi (olana amin'ny voa), izay tsy maintsy tsaboina amin'ny fotoana ahamarihana ireo soritr'aretina. Izy io koa dia mora tohina amin'ny atrophy retina miandalana, ny olana amin'ny tsinay sy ny maso.
Tsy maninona ny Basenji ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fanatanjahan-tena. Mavitrika be izy io ao an-trano ary hisy tokontany kely. Ny Basenji no faly indrindra rehefa voatazona amin'ny Basenjis roa na telo hafa izy ireo dia tsy hiady amin'izy samy izy.
manao ahoana ny labradoodle
Mila fampihetseham-batana isan'andro mahery vaika ny Basenji. Manana fironana ho tonga matavy sy kamo izy ireo, raha tsy hoe tsy mifanaraka amin'izany ny tompony. Mila karazany ity karazana ity dia an-tongotra lavitra isan'andro .
4 - 6 puppy vavy Basenjis dia tonga hafanana indray mandeha isan-taona, fa ny ankamaroan'ny karazany hafa dia indroa isan-taona.
Manasa ny tenany toy ny saka i Basenji ary tsy manana fofona doggie, ka mila fikarakarana kely dia kely. Ity karazana ity dia mandena kely tsy misy volo.
Ny dian'alika alika mitovy amin'ny Basenji dia hita ao amin'ny fasana sy sary amin'ny rindrina ejipsiana dimy arivo taona lasa izay. Antsoina koa hoe Dog Dog, dia nampidirina voalohany tany Angletera izy tamin'ny 1937. Ny mpiompy anglisy dia nanadio azy ary nanondrana izany erak'izao tontolo izao. Tany Afrika, ny alika dia nampiasain'ny tompon-tany ho mpitari-dalana any an'ala, hampitandrina ny amin'ny fanatonan'ny biby mampidi-doza, noho ny fanondroana sy ny fakana lalao kely sy ny familiana lalao amin'ny harato. Ny voalohany fako alika Basenji teraka sy nihalehibe tao Etazonia dia tamin'ny 1941 ary ny AKC dia neken'ny AKC tamin'ny 1944.
Alika mpiady ady totohondry sy manga
Basenjis — Gunther (tricolored) amin'ny 2 ½ taona ary voatavo (mena) 8 volana— 'Nijanona andro vitsivitsy tao amin'ny tranon'ny zanak'anabaviko aho ary ny Basenjisany no BOMB !! Ilay mena kely dia antsoina hoe voatavo ary ny iray hafa dia Gunther. Mamy tokoa izy ireo. Voatavo miaraka amiko eo ambony sezalà miaraka amin'ny lohany voafono ao ambanin'ny saokako. Izy dia tena mahafatifaty sy mamy fotsiny. Mahagaga izy ireo ary gaga noho ny habeny. Ary tena mahay mitsambikina zavatra lava toa ny lamosin'ny sezalà (izay indrisy fa teo an-dafin'ny ankamaroan'ny fotoana ny lohako). ) Tena mahatalanjona izy ireo. Tianay ny mihaona amin'izy ireo indraindray. Ankizy kely mahafinaritra! '
Keiki the Basenji puppy amin'ny 5 volana
Perrin the Basenji tamin'ny 1 ½ taona tamin'ny dia nitoby
Kairo ilay tricolor Basenji amin'ny 18 volana
Retriever volamena 1 taona
Benji the Basenji miaraka amin'ny Shrek
Perrin the Basenji amin'ny 1 taona
Manantena ny alika kely Basenji amin'ny 6 herinandro miaraka amin'ny mpamatsy azy
'Ity dia EV, alika kely Basenji 8 herinandro izay zazakely ratsy tokoa, fa manao izay tsara indrindra ataon'ny Basenjis, mandositra. Izany no antony iray mahatonga ny Basenjis tsy karazany ho an'ny rehetra. Ankoatra ny fahaizan'izy ireo mihanika fefy tsara dia afaka mianika hazo koa izy ireo, mihady ambanin'ny fefy ary mitsambikimbikina amin'ny fefy. Mety hanimba be ao an-trano koa izy ireo. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Basenji
Basenji Sary 1
Basenji Sary 2
tongotry ny alika dia mivoaka ivelany rehefa mijoro
alika afangaro keeshond amidy
Sarin'alika alika boxer 3 volana
leonberger bernese tendrombohitra alika Mix